रवि लामिछानेलाई यक्ष प्रश्न | NepalDut
रवि लामिछानेलाई यक्ष प्रश्न
विष्णु गुरुङ ‘एकता’ लेकसाइड, पोखरा
अर्काको आलोचना गर्नु महापाप हो किनकी त्यसले समय बर्बाद गर्छ । तर, यो कसैको आलोचना होइन, विरोध पनि होइन । आज(सोमबार) बिहान इनबक्समा भएको आर्टिकल एउटी महिलाको वेदना पढ्नबाट आफूलाई रोक्न सकिनँ, पढें । रवि लामिछाने सायद अरु कोही होला भन्ने लागिरहेको थियो, जीवनी मिल्दै जाँदा मनमा अलिकति शंका लाग्यो । उत्तिनै खेर दुई जोडीको युवास्थाको फोटो देखें, सपना जस्तै लाग्यो ।
रविको साहस र कामले गर्दा उनका फ्यान अति धेरै छन् । तीमध्ये म पनि एक हुँ । नेपाली जनताका लागि भगवानझैं उदाइरहेका लामिछाने अझ नेपाली चेलीहरुलाई अति माया गर्ने उनको व्यक्तित्वले गर्दा सधै उनको भलाइको लागि प्रार्थना नगर्ने को होला र ? हो, अतीत गैसक्यो, वर्तमान अहिले रवि सबैको प्रसंशनीय व्यक्ति, देशको एक कर्मठ नागरिकको रुपमा उभिएको छ ।
के ग्यारेन्टी छ कि अर्की श्रीमती जीवनभर स्वास्थ्य रहन्छिन् भन्ने ? उनलाई पनि डिप्रेसन भयो भने त्यसबेला के गर्छौ रवि तिमी ?
कुरा के रहेछ भनेर उसको अन्तर्वार्ता हेरें । उसले आफ्ना २ बच्चाकी आमा श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै बाहिर अर्कै केटी सँगसँगै बसेर सम्पर्क रहेकाले छोरासमेत भएको कुरालाई घरको वातावरणमाथि दोष लगाएको देखियो । त्यस कुरामा आफ्नो अलिकति भूल भएको भनेर भनेको सुन्नु पर्दा, नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोचले अझ यत्ति जटिलरुपमा जरो गाडिरहेको महसुस जोकोही महिलालाई सजिलै हुन्छ । मलाई पनि भयो, अति दुःख लाग्यो ।
हो, जति नै माया गरेर विवाह गरेता पनि, पछि मन मिल्न नसक्ला, विचार फरक रुपमा आउलान्, हरेक नसोचेको कुरा आईपर्छन् । जीन्दगीमा भोलि के हुन्छ ? कसैलाई थाहा छैन । तर, रवि लामिछाने जस्तो नैतिकताको पाठ अरुलाई सिकाउने, देश सुधार्ने सोच बोक्ने व्यक्तिले आफ्नी २५ वर्ष वैवाहिक जीवन बिताएकी २ बच्चाकी आमालाई डिप्रेसनको रोगी हुन् र अहिले पनि त्यो समस्या उनमा छ भनेर डिभोर्स गर्नु के मानवीयता हो ?
उनले भएको सम्पत्ति दिएर ईशालाई आफ्नो जीवनबाट हटाए र अर्को नयाँ मन पर्ने जीवनसाथीको साथ पाउने वातावरण त मिल्यो । तर, के ग्यारेन्टी छ कि अर्की श्रीमती जीवनभर स्वास्थ्य रहन्छिन् भन्ने ? उनलाई पनि डिप्रेसन भयो भने त्यसबेला के गर्छौ रवि तिमी ?
फेरि यो जिन्दगीको के भर ? तिमीमाथि नै दैब लागि गो र तिमी नै डिप्रेसनको रोगी भयौ भने ? त्यस बेला तिम्रो जीवनसाथीले यस्तो नभोनोस् कि तिमी डिप्रेसनको औषधी खान्छौ, मलाई यौन तीर्खा मेटाउन सक्दैनौ । म बाहिर अरु नै केटासँग यौन तीर्खा मेटाउछु । बहाना जे बनाए पनि हुन्छ तर सत्य एउटै हुन्छ यो कसैले नभुल्नू !